November 28, 2019 - ThutaSone
November 28, 2019 ThutaSone 0
ဓနုဖြူမြို့ ၁၄ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သော ကျောင်းဆရာမလေးမထွန်းအိအိလှိုင်ပျောက်ဆုးံသည်မှာ ၃လပြည့်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါရှဲပေးချင်းဖြစ်လည်းကူညီကျပါ အဆက်အသွယ် လုးံဝမရှိပါဆရာမလေးဘယ်ဘက်မျက်လုးံထောင့်နှင့်နုတ်ခမ်းပေါ်တွင်ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့ရှိပါသည် ။မြင်လျှင် မှတ်မိသောရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အရပ် ၄ပေ ၆လက်မသာရှိပါသည်။ စကားပြောသွက်အနေအေးပါသည်။(အ မ က ဝါးရုံချောင်းတွင်မူလတန်းပြဆရာမပါ)တွေ့ရှိပါက ၀၉၆၉၃၅၄၂၂၂၃အုပ်ထိမ်းသူသို့လည်းကောင်း ဓနုဖြူရဲစခန်ူးဖုန်း ၀၄၆၂၅၄၇၂ စခန်းမှုးဖုန်း ၀၉၄၂၄၂၉၀၅၆၆ နယ်ထိန်းဖုန်း ၀၉၂၅၄၄၆၄၄၄၃ သို့ဆက်သွယ်ပေးကျပါ။ […]
မေတ္တာဆိုတာ … ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတစ်ပါးတို့အား ဒုက္ခ မပေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထား။ သူတစ်ပါးတို့အတွက် ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထား။
မေတ္တာဆိုတာ … ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတစ်ပါးတို့အား ဒုက္ခ မပေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထား။ သူတစ်ပါးတို့အတွက် ကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထား။ ကရုဏာဆိုတာ… ဘယ်သူကိုမျှ မညှင်းဆဲဘူး။ ဘယ်သူ ဒုက္ခ ရောက်ရောက် ငါကူညီစောင့်ရှောက်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်ထား။ ဥပေက္ခာဆိုတာ… မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဟန်ချက်ညီအောင်နေတာ။ ကြောက်တဲ့ […]
သတိကပ်ပြီး ဥာဏ် ကောင်းခဲ့လို့ YBS 76ပေါ်မှာ တို့ဆေးမိပြီး ပစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ သမီးလေ့း လွတ်မြောက်ခဲ့ရ
ခုတလော လူပျောက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် တိုးပွားလာခဲ့ပေမယ့် တရားခံ တဦးတယောက်မျှ ဖမ်းမမိသေးတာကတော့ စိုးရိမ်ရမယ့် အနေအထားပါပဲ။ မနေ့ကလဲ ybs 76 ပေါ်မှာ တိုးဆေးမိခဲ့တဲ့ ညီမလေး တယောက် ညာဏ်ကောင်းတာရယ် ဆေးပမာဏ နည်းသွားတာရယ်ကြောင့် လွတ်မြောက်ခွင့် ရခဲ့ပေမယ့် သားကောင်ရှာတဲ့ မုဆိုးတွေဟာ နောက်တကြိမ်း […]
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း (28.11.2019 မှ 04.12.2019 အထိ)
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း 28.11.2019 မှ 04.12.2019 အထိ တနင်္ဂနွေ ဒီကာလမှာတော့ အများပြည်သူသုံးစွဲကြတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးတွေ ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းပွင့်တတ်ပါတယ်။ ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်ထားသူများ အရောင်းအ၀ယ်တွေ ပြန်တတ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်တတ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ လခစားဝန်ထမ်းများ အလုပ်ကြောင့် အဝေးသွားရတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ရတာများတာကြောင့် ၀င်ငွေထွက်ငွေမမျှဆိုတာမျိုးတော့ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ […]
မွေးလာတဲ့ရင်သွေးလေးကို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဖြစ်စေချင်ရင် ဒါတွေစားပေးပါ
မွေးလာတဲ့ရင်သွေးလေးကို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဖြစ်စေချင်ရင် ဒါတွေစားပေးပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအဖို့ သတင်းကောင်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မွေးလာတဲ့ရင်သွေးလေးကို ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဖြစ်စေချင်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ အစားအသောက်နဲ့ ဖြူအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကတော့ သင်လည်းယုံကြည်ရင် စမ်းလုပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အရှုံးမရှိပါဘူးနော် (၁) ကြက်ဥ ကြက်ဥအကာကို စားပေးခြင်းဖြင့် မွေးဖွားလာမယ့် ရင်သွေးငယ်လေးရဲ့ အသားကိုဖြူစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ရသေးပဲကိုယ့်ချစ်သူပုံနဲ့နှစ်ယောက် တွဲတင်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးရလဒ်
အသိ-သတိ ရှိပါ -ညီမငယ်(သို့) မနမ်းထိုက်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့် ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ချစ်သူ ပုံနဲ့နှစ်ယောက် တွဲတင်ခြင်းက ဓါးသွားထက်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့ အတူတူပါပဲ~ညီမငယ်~ တစ်ကယ်လို့သာ ကံကြမ္မာက လှည့်စားသွားခဲ့ရင်ပထမဦးဆုးံ ထိရှခံစားရမှာက ဘယ်သူလို့ထင်လဲကိုယ့်နှလုးံသား မဟုတ်သလို မာနနဲ့ သိက္ခာတွေပါ -ညီမငယ်~ နှလုးံသားတွေ နာမကျန်းဖြစ်စေတာက […]
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲက နှုတ်ဆက်ထွက်ခဲ့ရပြီးနောက် ပြဿနာတွေနဲ့သာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တန်ခွန်ကျော်
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲကြီးမှ ပရိသတ်အများဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရသူ နာဂတိုင်းရင်းသားလေး တန်ခွန်ကျော်ကတော့ ပြိုင်ပွဲကြီးက နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာချိန်မှ စကာ ပြဿနာတွေနဲ့သာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာတဲ့ အနေဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ “သို့ သက်ငယ်မုဒိန်းကောင်းများ” သီချင်းကို သီဆိုခါနီးမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ “ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ သီချင်း” လို့ […]
ပယင်း အစစ်ရထားတတ်လျှင် ဒီလို အစွမ်းတွေရှိပါသတဲ့
တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ ပယင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ နှင့် လူတွေမသိသေးသော ပယင်း၏ ကျန်းမာရေးအစွမ်းများ လူတွေမသိသေးသော ပယင်း=Amber၏အစွမ်းများ…. ပယင်းကသစ်ပင်ကဖြစ်တဲ့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း၁မျိုးပါ… သစ်ပင်ရဲ့အဆီအနှစ်ဖြစ်တဲ့သစ်စေးကနေဖြစ်တည်အတွက်.. သဘာဝကပေးတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ထဲက ၁ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်…. တန်းဖိုးထားရာ ရတနာ ( ၉ )ပါးထဲမှာလဲတစ်ပါးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်… ပယင်းမှာ အဖိုးတန်ရတနာများကဲ့သို့ ရှားပါးမှု ဖြစ်တည်မှု သန့်ရှင်းမှုအစရှိသည်များနှင့်ပြည့်စုံနေသောရတနာ၁ပါးလဲဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း၁၂၀ခန့်က အဖိုးတန်သက်ရှိများသိုမှီးရာ […]
စိတ်ညစ်တာကို ညစ်တဲ့ အတိုင်းမထားဘဲ ဒါတွေလုပ်ပါ
စိတ်ညစ်လာရင် ခါးကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထား … မျက်လုံးလေးမှိတ် …လက်အုပ်ကလေးချီပြီး ငါးပါးသီလကို ယူလိုက်ပါ တစ်ဆက်တည်းပဲ – “မြတ်စွာဘုရား၊ ဘုရားတပည့်တော် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို သီတင်းသုံးတော်မူ ပါဘုရား”လို့ ပင့်လိုက်ပါ … ကိုယ်က အမျိုးသမီး ဖြစ်နေလို့ ပင့်ရမှာ အားနာနေရင်လည်း ဦးခေါင်းထက် ကို ပင့်လိုက်ပါ […]
ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခု ဤပုံကိုကြည့်ပါတန်ဖိုးသိသူတိုင်း မြင်နိုင်ပါသည်။သွေးသည်အသက် အသက်သည်သွေး မိမိအသက်ရှင်ရေးအတွက် လာရောက်လှူဒါန်းပေးသော သွေးလှူရှင်အား လာရောက်ကန်တော့နေသည်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှ ကျေးဇူးတရား သိတက်ပုံကိုပြသလိုက်သည်မှာ သွေးလှူရှင် အံ့သြလောက် အောင်ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ… ဆင်းရဲပေမဲ့ကျေးဇူးတရားသိတက်လှပေသည်။သွေးတစက်၏တန်ဖိုးကို သိတက်သည့် လူဆင်းရဲ၏ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာသော သမီးဖြစ် နိုင်ပါသည်။တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။တန်ဖိုးမသိက တန်ဖိုးဆုံရှုးနိုင်ပါသည် […]
“အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ နေ့နံမတူလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ”
“မိဘကို လုပ်ကျွေးသော သားသမီးတိုင်း လက်တွေ့ခံစားရမည့် အကျိုးတရား (၁၂) ပါး…”
တစ်သက်မှာ တစ်ခါဖူးမြော်ဖို့ ခဲယဉ်းလှသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်
ယောက်ျားလေးဖြစ်နေရင် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်သင့်သလိုမိန်းကလေးဖြစ်နေရင် ကိုယ့်ချစ်သူဆီ ရှဲလ်ပေးသင့်ပါတယ်
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ နားလည်မှုရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ အနားမှာသာ နေပါ